Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 269853 times)
« Reply #170 on: August 17, 2014, 09:33:16 AM »
हिम्मतवाली रेखा थापाले लाली जोवन अर्कैलाई सुम्पेपछि…
रेखा थापाको निर्माण तथा निर्देशनमा निर्माण गरिएको नयाँ चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ ।
आगामी बडादशैंको फूलपातीका दिनबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको यस चलचित्रमा रेखाका साथमा नायक सुदर्शन गौतम संसारकै पहिलो दुवै हात नभएका नायकका रूपमा देखिँदैछन ।
यसअघिको चलचित्र ‘लंका’ व्यवसायिक रुपमा सफलता पाएपछि रेखाले आफ्नै ब्यानरमा अर्को नयाँ चलचित्रमा निर्माण गरेकी हुन । यस चलचित्रले रेखा थापालाई पून एकपटक एक्सन लेडीका रुपमा दर्शकहरू माँझ परिचित गराउने भएको छ ।
यस चलचित्रमा रेखाले खतरनाक स्टन्टका दृश्यहरू दिएकी छन् । यो चलचित्र हेर्नका लागि अपाङ्ग दर्शकहरूका लागि २५ प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ । चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ मा द्धन्द्ध निर्देशन चन्द्र पन्तले गरेका छन् ।
बसन्त सापकोटा र टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको यस चलचित्रलाई रामशरण उप्रेतीले छायाँकन गरेका छन् । ‘हिम्मतवाली’ मा बसन्त श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन रहेको छ भने आमा सरस्वती थापा निर्माता रहेकी छन ।
अब रेखाको यो एक्सन प्रधान चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ लाई दर्शकले कत्तिको रुचाउने हुन त्यो भने प्रर्दशनमा आएपछि नै थाहा हुनेछ ।
« Reply #171 on: August 22, 2014, 12:23:59 AM »
« Reply #172 on: March 09, 2015, 12:34:37 PM »
कलाका 'पावर लेडी'
पछिल्लो समयमा कलाकार र निर्देशकको फिल्म असफल भइरहेको बेला रेखा थापाले आफ्नै बलबुतामा फिल्म निर्माण र निर्देशनको लगाम हाँकेकी छिन् । रेखाको 'स्टारडम'ले पुरुषको मनोपोलीलाई छायामा पारेको छ । उनी नाम र दाम कमाउन सफल छिन् । एक्सन भूमिकालाई समेत अपनाएर उनले महिला चरित्रलाई 'बोल्ड' बनाएकी छिन् । पुरुषले मात्र गर्ने सक्ने ठानिएको एक्सन रोलमा उनले आफूलाई फिट राखेकी छिन् । दर्शक अब रेखाको 'अंग' होइन 'दंगा' पनि हेर्न हलमा धाउन थालेका छन् ।
'बाटुली', 'किस्मत', 'कसले छोयो मेरो मन', 'इसारा', 'अन्दाज', 'लंका', 'रावण', 'काली', 'हिम्मतवाली' लगायत डेढ सय फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन्, रेखाले । उनी अभिनय र फिल्म निर्माणमा सफल मानिन्छिन् । फिल्मका अतिरिक्त महिला अधिकारका क्षेत्रमा पनि उनले आफूलाई क्रियाशील तुल्याउँदै लगेकी छिन् ।
« Reply #173 on: March 10, 2015, 12:23:03 PM »
रेखाको सुदर्शन संगको चक्कर नै चक्कर आउने थियो .... हात नभएको मान्छेले रेखा जस्तो लाई कसरी सन्तुष्ट पार्न सक्ला भन्ने लागेको थियो ...
हो त रहेछ नि
बाइ बाइ गरिन रे ...
« Reply #174 on: March 11, 2015, 08:59:20 AM »
होलीले मेटाएन रेखा-आर्यन दुश्मनी
रङको पर्व होलीलाई नेपालीहरु भाइचाराको पर्वका रुपमा मनाउँछन्। आपसका तिक्तता र दुश्मनीलाई रङसँगै मेटाउने गर्छन। तर, नेपाली फिल्मका दुई कलाकारको दुश्मनी भने यसपालीको होलीले पनि मेटाउन सकेन।
अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री रेखा थापाबीच करिब ५ वर्षदेखि बोलचाल बन्द छ। कुनैबेला फिल्मको पर्दामा संगै रोमान्स गरेको यो जोडी बिहिबार होली मनाउन एकै ठाउँमा महाराजगञ्जको रेड स्टुडियोमा पुगेको थिए। निर्देशक आकाश अधिकारीले आयोजना गरेको होली विशेष कार्यक्रममा रेखा सबेरै आएकी थिइन्। फिल्म जगतका अन्य कलाकार सहभागी भएको कार्यक्रम रेखा र आर्यनले अरुसँग रङ खेलेपनि आपसका रङ खेलेनन्।
श्रीमतीसँगै पुगेका आर्यनले आफ्नी आमासँगै बसेकी रेखालाई नदेखे झैं गरे। रेखाले पनि उनलाई कुनै वास्ता गरिनन्। एकछिन होली खेलेर आर्यन निर्माता तथा रेखाका पूर्वपति छविराज ओझासँग होली खेल्न पुगेका थिए।
५ वर्ष पहिले रिलिज भएको सिनेमा ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ भन्दा ‘कोही मेरो‘ का विषयमा यी दुई कलाकारबीच विवाद भएपछि उनीहरुको बोलचाल बन्द भएको हो।
« Reply #175 on: March 12, 2015, 08:43:03 AM »
रेखालाई "महानायिका" रे ...
« Reply #176 on: March 17, 2015, 12:27:11 AM »
Rekha shows black bra by wearingatransparent kurta in Pune, India
rekha thapa in india.jpg (62.59 kB, 588x948 - viewed 368 times.)
rekha thapa transparent kurta.jpg (55.28 kB, 824x960 - viewed 357 times.)
« Reply #177 on: March 20, 2015, 12:13:42 PM »
‘म फरार भएको छैन, मसँग जोडेर रेखाको बद्नाम नगर्नुस्’ : सुदर्शन
रेखा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्मित फिल्म ‘हिम्मतवाली’ मा महत्वपूर्ण पात्र भएर अभिनय गरेका कलाकार सुदर्शन गौतमले साप्ताहिक ‘दृष्ट्रि’ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको समाचारप्रति खण्डन गर्दै आफ्ना अभिव्यक्ति बाहिर ल्याएका छन् । दुवै हात गुमाएर पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका सुदर्शनले उक्त पत्रिकामा प्रकाशन भएको समाचार झुठो भएको र दोषी ठहरिए आफु कारबाही भोग्न र लड्न समेत तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै आउँदो वर्षको भदौमा फिल्म ‘सुपरहिरो’ निर्माणमा नेपाल फर्कन भन्दै नायिका रेखा थापालाई आफुसँग जोडेर बद्नाम नगराउन समेत उनले आग्रह गरेका छन् । परिवार सहित क्यानडा बस्दै आएको सुदर्शन व्यावसायको लागि केही महिनादेखि अमेरिकामा छन् । अमेरिकाबाटै कलाकार सुदर्शन गौतमले जारी गरेको अभिव्यक्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
सुदर्शन गौतम मृत्यलाई जितेर आएको मर्द हो । फरार र भागेर हिंड्ने लाचार र नामर्द होइन् । नायिका रेखा थापा मेरो गड फादर हो । म फरार रे ? भाद्र बाट ‘सुपर हिरो’ फिल्म को शूटिंग लागि नेपाल म । दृष्ट्री साप्ताहिक, जन आस्था तथा अनलाइन समाचारहरुमा मेरो बारेमा आएको समाचार पद्ने मौका पाउदा बहुत हाँसो आयो । म करोडौं रुपैयाँ लिएर फरार भएँ रे , भयो त् अब ? यो समाचार संगै कुन पुलिस चौकी मा मेरो केस पर्यो दर्ता नम्बर संगै, र को को संग पैसा लिएर फरार भएको थिए ? विस्तृतमा लेख्नु भएको भए झनै आभारी हुने थिएँ । सुदर्शन गौतम मृत्युलाई पनि जितेर आएको मर्द हो । फरार र भागेर हिड्ने लाचार र नामर्द होइन । यदि गल्ति मैंले गरेको नै थिएँ भने पनि, समस्यासँग जुद्ने र सामाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ म । भागेर हिंड्ने कायर होइन । मलाई बहुतै दया लागेर आयो दष्ट्री साप्ताहिक र अरु समाचार पत्रिकाहरु संग जसले यो समाचार साभार गरेर मलाई साथै नायिका रेखा थापालाई सुनियोजित तरिकाले बदनाम गरियो । तिनै पत्रिकाहरु जसले दिल शोभा दिदि जस्तो मान्छे लाई त मर्नु न बाँच्नु को आरोप लगाएर बिजेत गर्नु भयो । अब म के भनौं यो बिषय मा ।
म बिगत ७ वर्ष देखि क्यानाडा बस्छु । क्यानाडा मेरो घर हो । नेपाल मा फिल्म ‘हिम्मतवाली’ को रिलिज पछि म आफ्नो देश फर्किएको हो र अहिले आफ्नो ब्यापार व्यावसाएको सिलसिलामा म अमेरिकामा छु । केहि महिना देखि म जहाँ छु खुलम खुल्ला बसेको छु यो कुरा सबै लाई थाहा छ । फेरी म कसरी फरार भए ? अर्को कुरा मेरो आगामी चलचित्र ‘सुपर हिरो’ को सुटिंगको लागि म नेपाल आउदै छु । २ महिना पछि, फरार व्यक्ति के फेरी सुटिंगको लागी नेपाल जान सक्छ त ? म तपाईहरु को पत्रकारिता देखेर ३ छक्क परेको छु । जे मन लाग्यो त्यो कुरा लेख्नु त राम्रो भएन नि ?
म सानै थिएँ । नायिका श्रीषा कार्कीले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नु भएको समाचार सुन्दा । आज त्यो दिन मलाई याद आयो । मान्छेको ज्यान मार्ने यो सजिलो उपाय रहेछ, भ्रामक समाचार पनि । यो मान्छे मारेको भन्दा ठुलो अपराध हो बिना प्रमाण झुटो समाचार लेखेर मान्छेलाई दोसी बनाउनु । देश मा कानुन छ, पुलिस, प्रशासन छन्, पत्रिका को काम दोषी प्रमाणित भएपछि मात्र समाचार बनाउनु हो । तपाई त् कानुन भन्दा माथि हुनु भयो पत्रकार ज्यु । तर यी कुराहरु भन्दै गर्दा यो भान नहोस् कि म डराएँ, म श्रीषा कार्की जस्तो कमजोर मान्छे होइन । मैले गल्ति गरेको छु भने सजाएँ भोग्न पनि र होइन भने लड्न पनि तयार मर्द हु ।
रेखा थापा र मेरो प्रसंग
नायिका रेखा थापा यस्ती रे उस्ती रे भनेर चरित्र हत्या गर्ने समाचारहरु पत्र पत्रिका मा मैले बिगत ८,९ वर्ष देखि पढ्दै आएको थिएँ र मैले रेखालाई यी कुराहरु के हो भनेर सोध्दा उनि जबाफ दिन्थिन कि, यो देशमा रेखा थापा, गिरिजा कोइराला र प्रचण्डको कुरा नकाटी लेखेको समाचार पनि बिक्छ र भनेर । रेखा यस्तो गलत समाचार को कुरा पनि सुन्न चाहदिथिनन् । कारण थियो कि प्रत्यक मान्छेको आशा रेखा थापाले पुरा गर्न सक्दैन थिइन् । जब मानिसका आशाहरु निराशामा बद्लिन्थे तब तिनै मानिसहरु रेखा थापाका बर्गीय सत्ताको रुप धारण गर्थे । आजको यो समाचार पनि त्यस्को नै एउटा नमुना हो । मेरो काम र नाम जोडेर रेखा थापालाई बदनाम गराउन खोज्नु यो कतै को पनि न्यायपूर्ण काम होइन र यदि मैले गल्ति गरेको रहेछु नै भने पनि रेखा थापाको नाम नजोडी तपाईहरु को समाचार बिक्दैन थियो र ? बारम्बार रेखा थापाले सुदर्शन गौतमलाई युज गरिन् रे, मिस युज गरिन् रे, पैसा खाईन् रे, यस्तो रे उस्तो रे, सुदर्शन ले ‘हिम्मतवाली’ मा पैसा लगानी गरे रे । के हो के यो सबै ? लाग्छ यो देशमा त् रेखा बाहेक अरु कोहि फिल्म नै बनाउदैनन् । अरु कलाकार नै छैनन् । सिधा मेरो कुरा के हो भने, रेखा थापा मेरो गड मदर र फादर हुन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रगोगको रुपमा मलाई नयाँ परिचय दिलाउने नयाँ सोच र विचार बोकेकी र नेपाल राष्ट्रलाई बहुत माया गर्ने नेपाली नारी हुन् । सुदर्शन गौतमको रेखा थापाप्रति यो सास रहन्जेलसम्म सम्मान र आदर रहने छ । हो हामी एक अर्कालाई माया गर्थ्यौं, गर्छौ र मर्ने दिन सम्म पनि गरि रहन्छौ । हामी असल साथी हौं । साथी मात्र नभएर एउटा परिवार को सदस्य पनि हो म । २ दिन नबोल्दा र फेस बुकमा कमेन्ट मैंले नगर्दा रेखा थापासंग मेरो समन्ध बिग्रिएको हुंदैन। रेखा थापा को बिबाह समारोहमा मात्र होइन कि मेरो उपस्थिति उनीहरुको बच्चाहरुको बिबाहमा सम्म पनि सामिल हुने समबन्ध हो यो । सानो तिनो हावाहुरी ले यो समन्ध बिर्गान सक्दैन । अर्को कुरा ‘चलचित्र’ हिम्मतवाली मा मेरो लगानी छैन । मेरो पैसा रेखा ले खाने होइन बरु हिसाब गर्ने हो भने बरु मैले नै उनलाई तिर्नु पर्छ होला । तपाईहरु जस्तो रास्ट्रिय इस्तरको पत्रिकामा कलाकारहरु को यस्तो झुटो र हावा समाचार लेखिनु राम्रो होइन । जति पनि पत्रकार साथिहरु जसले मलाई विश्वास गरेर यो समाचार साभार गर्न जरुरी ठान्नु भएन म उहाँहरु प्रति धेरै नै आभारी छु र तपाईहरुको विश्वासमा कमी आउन पनि दिने छैन । जो जसले जानी नजानी सुनेको भरमा समाचार बनाउनु भयो बहुत दुःख लागेको छ, उहाँहरुप्रति ।
rekha_sudarshan.jpg (115.68 kB, 369x500 - viewed 525 times.)
Rekha Thapa - खराब हल्ला नहोस् भनेर सुदर्शनसँग प्रेमकाे हल्ला गरेँ -रेखा था
« Reply #178 on: March 26, 2015, 12:19:58 PM »
खराब हल्ला नहोस् भनेर सुदर्शनसँग प्रेमकाे हल्ला गरेँ -रेखा थापा
धेरैले चर्चाका लागि रेखा थापा जे पनि गर्छिन् भन्ने ठान्छन्। रेखा भन्छिन्- मैले जे गरेपनि चर्चा हुन्छ। सत्य केहो भने रेखा थापाको नयाँ फिल्मसँगै चर्चाको नयाँ विषय पनि आउँछ। उनले फिल्म चलाउनका लागि गरिएका भनिएका केही चर्चीत रहस्यहरू आज प्रकाशित शुक्रबारमा खोलेकी छन्।
रेखालाई धेरैले पर्दामा देखे। थोरैले नजिकबाट नियाले। जतिले पर्दामा देखे, उनीहरूलाई छोटो पहिरन लगाउने उत्ताउली केटी लाग्यो। पर्दाकी पात्र चरित्र रेखा थापामा मिसाइयो। हिरोइन रेखा र बाहिरी रेखाबीच फरक छुट्टाउने काम गरिएन जतिबेला नारीलाई रोनाधोनामै सिमित राखेर निरूता (सिंह) दिदीहरूलाई प्रस्तुत गरिन्थ्यो, त्यतीबेला कलेज पढ्ने युवतीको भूमिकामा म प्रस्तुत भएकी हुँ र छोटो कपडा लगाउने केटीको चरित्र निर्वाह गरेकी हुँ। त्यसमा पहिरन सुहाउने उमेर पनि सदुपयोग गरेकी हुँ। त्यसको चर्चा भयो। पात्र अनुसार छोटा कपडा लाउथेँ,लाउँछु र लाइरहन्छु।
हिरोसँग प्रेमको हल्ला
फिल्म किस्मत मार्फत डेब्यू गरेका हिरो आर्यन सिग्देलसँग जोडेर प्रेम रहेको हल्ला पहिलोचोटी चल्यो । त्यो मेरो आफ्नो आइडिया होयन । एकजना पत्रकार दाइले फिल्मलाई फाइदा पुग्छ हल्ला गरिदेऊ न भन्नुभयो । म राजी भएँ । मलाई नजिकबाट नचिनेकाले त्यसलाई आधार बनाएर अरुसँग नाम जोडेर पनि हल्लना गरिरहे ।
त्यसपछि फिल्म हिम्मतवालीका हिरो सुदर्शन गौतमसँगको प्रेम प्रसँगबारे धेरै चर्चा भयो । ऊ मैले मात्र होइन सबैले प्रेम गर्ने खालको मान्छे हो । चर्चाका लागि पनि यो कुरा उछालेको होइन । खराब हल्ला नहोस् भनेर आफैले केही हल्ला गरेकै हो । किनभने मैले सुटिङ स्पटबाट निर्देशक श्याम भट्टराईलाई निकालेको थिएँ । सुटिङमा रहँदा स्वभाविक रुपमा दुइटै हात नभएको सुदर्शनलाई मैले खुवाएँ । माया गरेँ । त्यो कुरा गलत तरिकाले आउन थालेको सुइँको पाएँ । अरुले यीनीहरुबिच यस्तो सम्बनध छ भनेर भन्दा नरामे सुनिने देखियो । त्यसपछि मैले नै प्रेम छ भनिदिएँ ।
फेसबुकमा भएको संवादका कारण धेरैले स्टन्ट ठाने । तर, म बाबाको जन्मस्थल पहिलोपल्ट पुगेकाले त्यहाँको तस्विर राखेर आइ लभ यु बाबा लेखेँ । सुदर्शनले कमेन्ट ग¥यो । म जिस्किएँ । त्यो नियोजित थिएन् । उसलाई प्रेम गरेको कुरा जानी जानी भन्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ आइलागेको थियो । आजको शुक्रबारमा खबर छ ।
« Reply #179 on: April 01, 2015, 12:40:08 AM »